admin – Tamarmyay.com
ဝန်ထမ်း မလုပ်နဲ့ ညီလေး(ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ/ရှယ်​ခြင်းဖြစ်​ပါသည်​)
ငါ့ ညီ များ ဆယ်တန်းအောင်ဘွဲ့ရပြီးရင်လေ
” အ ” လွန်းလို့ တယ်များ ထင်နေကျလား
မသိဘူး ညီလေးရေ …..
သားရယ် ” ဝန်ထမ်း ဖြစ်တော့ ဂုဏ်ရှိတာပေါ့တဲ့ ”
သားတို့မာနတွေ သားတို့ တတ်ထားတဲ့ပညာတွေကို
ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ ဝါကျလေးတခု အတွက် ကြောင့် သူများဖိနပ်အောက်ထိုးထားရတယ် မေမေရယ်
” ပြုတ်သွားချင်လို့ လား ”
” မင်း ကတော့ အတိုင်ခံ ချင်နေတာ ”
အဲ့လိုစကားတွေ ကြားမှာ အံတင်းတင်း ကြိတ်မိတဲ့
အကြိမ်ရေတွေ လည်း မနည်းတော့ဘူးး
ဝန်ထမ်း ဆိုတာ •••• ဆော့ချင်တိုင်းဆော့ခံနေရတဲ့
ကြောင်တကောင်ရဲ့ လက်ထဲ က ကြွက်သေ တခုပါပဲ ညီလေးရာ
မှန်တာလည်း ရဲရဲ မပြောရ
လူ လူ ခြင်းတောင် အဆင့်တန်းခွဲခြားခံနေရတဲ့ ဘဝတွေ ••••
ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပဲ ဝန်ထမ်း မှားရင် အပြစ်ပေးခံရတယ်ညီလေး
လော်လီ လုပ်ကြံပြီး ဝန်ထမ်းတယောက်ကို မဟုတ်တာ တိုင်ပြန်တော့ ဝန်ထမ်း ဘက်က ရပ်တည်ပေးမဲ့သူ မရှိဘူး ညီလေး
ဇာတ်တူသား ကမှ ချိုတယ်ထင်နေတဲ့သူတွေ ပေါ့ ညီလေးရာ….
ပန်းပဲဖို က ပေတုးံလို ပဲ
ရခဲ လှတဲ့ မိသားစု ဘဝတွေ
လက်စုံစားဖို့ခဲယဉ်းနေတဲ့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းတွေ
တကယ်တော့ နွား ပါ ညီလေးရာ
လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်က ဘက်ညီရင်တော်ပါရဲ့
ကော်တော်ကပ်တတ် နဲ့ သိပ် ပခုံးကြိမ်းရတာ
ဘာမှမတတ်သူကလည်း ဆရာ လုပ်လိမ့်မယ်
၄တန်းအောင်ကလည်း ဘွဲ့ရ ကို ဆရာလုပ်ချင်တယ်
စနစ်ပဲ မှားခဲ့တာလား ငါတို့ ပဲညံ့ တာလား မဝေခွဲတတ်ပါဘူးကွာ
မြန်မာပြည်က ဝန်ထမ်း မလုပ်မိစေနဲ့ညီလေးရေ့
ငှက်ကလေးတွေရဲ့ ဘဝ ကို ယောင်လို့ တောင် စိတ်မ
ကူး မိပါစေနဲ့ညီလေးရေ ။ ။
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ဝန်ထမ်း မလုပ်နဲ့ ညီလေး(ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ/ရှယ်​ခြင်းဖြစ်​ပါသည်​)
ဒီနေ့တက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်သာလေးကုိ Review ရေးပေးပါမယ်.. ❤
✔ ဒီအိမ်သာလေးကတော့ မြစ်ကြီးနားဘူတာနားက အိမ်သာလေးပါနော်.. ဘူတာက မြစ်ကြီးနား မြို့လယ်ကောင်မှာ တည်ရှိတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်.. ဘူတာက ကယ်ရီသမားတွေကို မေးလိုက်တာနဲ့ ဒီအိမ်သာလေးကို အလွယ်တကူ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်..
✔ ဘူတာနဲ့နီးတယ်ဆိုပေမယ့် ချောင်ခပ်ကျကျနေရာက လူပြတ်တဲ့ အိမ်ဟောင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကားသံလူသံတွေနဲ့ ဝေးပါတယ်.. တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ချီးပါရင်း ကိုယ်ရဲ့ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လွတ်လပ်စွာ ခံစားလို့ရတာက ဒီအိမ်သာလေးရဲ့ အားသာချက်ပါပဲနော်..
✔ကားရပ်ဆိုင်ကယ်ရပ်ဖို့လည်း စိတ်ချ.. ​နေရာလွတ်တွေရှိတဲ့အတွက် လုံးဝ အဆင်ပြေပါတယ်.. ကားသော့ ဆိုင်ကယ်သော့တွေ ကိုတော့ သေချာခတ်စေချင်ပါတယ်..အီးပါရင်း သူခိုး ထ လိုက်ရတာ အရမ်းဣနြေ္ဒပျက်လို့ပါ..
✔ ရှေးအစဉ်အလာမပျက် ရိုးရာမပျက် အိမ်သာခွက်ကို ခွ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး အီးထိုင်ပါနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်… တိုက်အိမ်အဟောင်းကြီးနဲ့ကွယ်နေတဲ့အတွက်လည်း အိမ်သာကိုနေထိုးဖို့ဝေးတာမို့ အီးညစ်ရင်း ချွေးပျံရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို မေ့လိုက်ပါတော့နော်..
✔ ဘေးက အကာပျဉ်ချပ်တွေကြားမှာ နေရာလပ်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်လည်း လေတဟူးဟူးနဲ့ ဇိမ်ခံလို့ အရမ်း ကောင်းပါတယ်.. လေဝင်လေထွက်ကောင်းတော့ ကိုယ့်ချီးနံ့နဲ့ကိုယ် မွန်းကြပ်မှာ ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်..
✔ ပရဟိတဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အထူးအဆင်ပြေပါတယ်.. လွတ်နေတဲ့ပျဉ်ချပ်ကြားက တစ်ခါတစ်လေ ဝင်လာတတ်တဲ့ ယင်ကောင်မဲကြီးတွေရယ် ပြီးတော့ အိမ်သာရဲ့နောက်ဘက် ကျင်းပျက်ဘေးက ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို မစင်ဒါနလုပ်လို့ရပါတယ်.. အိမ်သာနားရောက်တာနဲ့ အမြီးလေးနှံပြီး ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုကြမယ့် ခွေးငယ်လေးတွေရဲ့ မျက်နှာကိုမြင်ရတာ ဖရဏာပီတိဂွမ်းဆီထိစရာပါပဲ ..
✔ အိမ်သာတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း သာမန်အိမ်သာတွေနဲ့မတူ3in 1 သန့်စင်စနစ်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်.. ရေသုံးမလား..ဒါမှမဟုတ် အသင့်ချိုးထားတဲ့ ပျဉ်တိုပျဉ်စတွေသုံးမလား.. ဒါမှမဟုတ် သတင်းစာအဟောင်းတွေကို သုံးမလား .. ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် ဂျာနယ်အဟောင်းတွေသုံးမလား.. သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာကတော့ တကယ့်ကို ကျေနပ်စရာပါပဲ..
✔ အပေါ့ပဲစွန့်မယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုတွေအတွက်လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဂိမ်းလေးတစ်ခု စီစဉ်ပေးထားပါတယ်.. ဒါကတော့ အိမ်သာခွက်မှာ ကပ်နေတဲ့ ချီးဖတ်လေးတွေကို ရှူးရှူးနဲ့ ပန်းခွာရတဲ့ဂိမ်းပါ.. အပျင်းလည်းပြေ ကိစ္စလည်းပြီး.. ကဲ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်သာလေးလဲ
✔ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့လည်း အီးပါရင်း အိမ်သာနံရံမှာ အမှတ်တရစာသားလေးတွေ ရေးချန်ခဲ့လို့ရပါတယ်.. တကယ်လို့များ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူကို မပြောရဲရင်လည်း ရင်ဖွင့်ခဲ့လို့ရပါတယ်..ဖူးစာမှန်ရင်တော့ သူအိမ်သာလာတက်ရင်း ဖတ်မိရင်တော့ အိမ်သာဖူးစာပဲပေါ့ ဖရင့်တို့ရေ..
✔ လောလောဆယ်တော့ အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း မရှိသေးပါဘူး…
တစ်ယောက်ချင်းပါပါ ဖင်ချင်းပူးပြီး နှစ်ယောက်ချင်းပါပါ စိတ်အေးချမ်းသာစွာပါလို့ရပါတယ်နော်.. သုံးယောက်ပါ နဲ့ Family ပါတွေကိုတော့ စီစဉ်ထားရှိပေးခြင်း မရှိသေးပါဘူး .. ဒါကတော့ဒီအိမ်သာလေးရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်ပါပဲနော်..
ကဲပါ ..ကျနော် ညွှန်းတာလည်း တော်တော် များသွားပြီ.. အညွှန်းဖတ်နေရုံနဲ့ အကျိုးမရှိပါဘူး.. ကိုယ်တိုင်သွားပါကြည့်မှပဲ ထူးခြားကွဲပြားတာကို သိရမှာမို့ ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တွေကို အမြန်ဆုံးလက်တို့လိုက်ပါတော့နော်..
” ကျန်းမာဖို့ အီးပါစို့ ”
” အဆင်ပြေဆုံး ဒီနေရာ ဘူတာဘေးနားမှာ ”
ိ( review ရေးရတာကြိုက်သူ) :3
Credit: Aung Zett Myo
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ဒီနေ့တက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်သာလေးကုိ Review ရေးပေးပါမယ်.. ❤
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ထူးခြား ဆုံး အကြွေေ စ့ များအကြောင်း
ဒီရာစုနှစ်တွေမှာလေ့လာရေးပညာရှင်တွေ တွေ့ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့အကြွေစေ့များစွာရှိခဲ့ပေမယ့်
ဒီအကြွေစေ့ကို အီဂျစ်က အိမ်တစ်လုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
အကြွေစေ့ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်မှာတော့ မီးခိုးရောင်ဂြိုလ်သားရုပ်ပါပြီးတော့ တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ပျံသန်းနေတဲ့အာကာသယာဉ်ပုံစံမျိုးပါပါတယ်
အနောက်မှာထွင်ထု တဲ့စာသားဟာလက်တင်စာဖြစ်ပြီးတော့ ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် “ဒီမှာပဲ” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်
၂ Anglo Saxon အကြွေစေ့
Anglo Saxon အကြွေစေ့
ဒါဆိုရင်တော့ကမ်းခြေမှာ မိုင်းရှာစက်နဲ့ရှာနေတဲ့သူတွေကို သင်ရယ်ဖို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Paul Coleman ဆိုတဲ့ ရတနာသိုက်ရှာဖွေသူတစ်ယောက်ဟာ Buckinghamshire မှာ အမှတ်ရနိုင်စရာတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
အေဒီ ၁၀၃၅ ခုနှစ် ဘုရင်မင်းမြတ် Canute အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်က ငွေဒင်္ဂါး အပြား ၅၀၀၀ ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါ
ဒါတွေဟာမြေအောက် ၂ ပေအနက်မှာမူအတိုင်းတည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွေကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ၁.၂ မီလျံပေါင်အထိရရှိခဲ့ပါတယ်
၃ Tomares အကြွေစေ့များ
စပိန်ကပန်းခြံတစ်ခုမှာပိုက်တွေတပ်ဆင်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေဟာ တန်တစ်ဝက်လောက်လေးတဲ့ အေဒီ ၃ရာစုကနေ ၄ ရာစုအတွင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရောမသုံးဒင်္ဂါးပြားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဒဂ်ါးတွေကို မြေအိုးထဲမှာပဲသိမ်းဆည်းထားတာလား ဒါမှမဟုတ် မြေအိုးထဲထည့်ပြီးမြှုပ်ထားတာလားဆိုတော့ သေချာမသိပါဘူး
ဒင်္ဂါးတွေကိုသေချာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ရောမအင်ပါယာမင်းနှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Constantine နဲ့ Maxiimian ဘုရင်နှစ်ပါးရဲ့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ကိုထွင်းထုထားတာတွေ့ရပါတယ်
Constantine ဟာ စစ်ဖြစ်နေခဲ့ရောမနယ်မြေကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီး Constantinople (ယနေ့အခေါ် Istanbul) အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီအကြွေစေ့တွေဟာ ရောမအင်ပါယာကထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စပိန်မှာတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
၂ Gold Rush အကြွေစေ့
Gold Rush အကြွေစေ့
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ အရမ်းကံကောင်းလွန်းတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဟာ လမ်းလျောက်ထွက်ရင်းနဲ့ထီပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားဟာ ရွှေတူးသမားတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ အခုချိန်ထိမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့ရွှေတွင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်
သူတို့ခွေးလေးနဲ့လမ်းလျောက်ထွက်နေစဉ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတန်ရှားပါးလွန်းတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားတွေ သစ်ပင်အောက်မှာမြှုပ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
အပြားပေါင်း ၁၄၂၇ ခုရှိပြီးတော့ ၁၈၄၇ ကနေ ၁၈၉၄ အတွင်းမှာ San Ana က Professional Coin Grading Service ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ David Hall က အတည်ပြုထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ရွှေဒင်္ဂါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
တချို့ဒင်္ဂါးတွေဟာအလွန်ရှားပါးတဲ့အတွက် တစ်ပြားကို ဒေါ်လာ ၁ သန်းအထိရနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဒေါ်လာ ၂၀ တန်ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပေါက်တာကို ကံကောင်းတယ်လို့သင်ထင်နေသေးလား
၁ Jerey သံခေတ်ဒင်္ဂါး
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဂျာဆီကျွန်းစုပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားတွေကိုမြင်ရင်သင်လန့်သွားနိုင်ပါတယ်
ဒီကျွန်းစုဟာ အင်္ဂလိပ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းခြုံထားပါတယ်
နှစ် ၃၀ လောက်ဒီရတနာသိုက်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
ရတနာသိုက်ရှာဖွေသူအသစ်နှစ်ဦးဟာ သံခေတ်က ဒင်္ဂါပြားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
အခုသူ့လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ဒင်္ဂါးပြားဟာ ပေါင် ၂၀၀ နီးပါးတန်ဖိုးရှိပါတယ်
ဒီတော့ တွေ့ရှိသမျှအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင် ပေါင် ၁၀မီလျံ ၁၂ မီလျံလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
ဒီဒင်္ဂါးတွေကိုတော့လယ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ခြံစည်းရိုးအောက် ၃ ပေအနက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ
ကမ်ဘာပျေါမှာ အ ထူးခွား ဆုံး အကွှေေ စ့ မြားအကွောငျး
ဒီရာစုနှဈတှမှောလလေ့ာရေးပညာရှငျတှေ တှခေဲ့တဲ့ ထူးခွားတဲ့အကွှစေမြေ့ားစှာရှိခဲ့ပမေယျ့
ဒီအကွှစေကေို့ အီဂဈြက အိမျတဈလုံးကိုပွနျလညျပွုပွငျတဲ့အခြိနျမှာတှခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ
အကွှစေရေဲ့မကျြနှာပွငျတဈဖကျမှာတော့ မီးခိုးရောငျဂွိုလျသားရုပျပါပွီးတော့ တဈခွားတဈဖကျမှာတော့ ပြံသနျးနတေဲ့အာကာသယာဉျပုံစံမြိုးပါပါတယျ
အနောကျမှာထှငျထု တဲ့စာသားဟာလကျတငျစာဖွဈပွီးတော့ ဘာသာပွနျမယျဆိုရငျ “ဒီမှာပဲ” လို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ
၂ Anglo Saxon အကွှစေေ့
Anglo Saxon အကွှစေေ့
ဒါဆိုရငျတော့ကမျးခွမှော မိုငျးရှာစကျနဲ့ရှာနတေဲ့သူတှကေို သငျရယျဖို့နောကျတဈခေါကျပွနျစဉျးစားမိပါလိမျ့မယျ
၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ Paul Coleman ဆိုတဲ့ ရတနာသိုကျရှာဖှသေူတဈယောကျဟာ Buckinghamshire မှာ အမှတျရနိုငျစရာတဈခုကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ
အဒေီ ၁၀၃၅ ခုနှဈ ဘုရငျမငျးမွတျ Canute အုပျခြုပျတဲ့အခြိနျက ငှဒေင်ျဂါး အပွား ၅၀၀၀ ကိုရှာတှခေဲ့တာပါ
ဒါတှဟောမွအေောကျ ၂ ပအေနကျမှာမူအတိုငျးတညျရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ
ဒါတှကေိုရောငျးခလြိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ၁.၂ မီလြံပေါငျအထိရရှိခဲ့ပါတယျ
၃ Tomares အကွှစေမြေ့ား
စပိနျကပနျးခွံတဈခုမှာပိုကျတှတေပျဆငျနတေဲ့ဆောကျလုပျရေးအလုပျသမားတှဟော တနျတဈဝကျလောကျလေးတဲ့ အဒေီ ၃ရာစုကနေ ၄ ရာစုအတှငျးမှာအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ရောမသုံးဒင်ျဂါးပွားတှကေိုတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ဒီဒဂျါးတှကေို မွအေိုးထဲမှာပဲသိမျးဆညျးထားတာလား ဒါမှမဟုတျ မွအေိုးထဲထညျ့ပွီးမွှုပျထားတာလားဆိုတော့ သခြောမသိပါဘူး
ဒင်ျဂါးတှကေိုသခြောလလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ ရောမအငျပါယာမငျးနှဈပါးဖွဈခဲ့တဲ့ Constantine နဲ့ Maxiimian ဘုရငျနှဈပါးရဲ့မကျြနှာပုံသဏ်ဍာနျကိုထှငျးထုထားတာတှရေ့ပါတယျ
Constantine ဟာ စဈဖွဈနခေဲ့ရောမနယျမွကေို ပွနျလညျပေါငျးစညျးပွီး Constantinople (ယနအေ့ချေါ Istanbul) အဖွဈတညျထောငျခဲ့တဲ့မငျးဖွဈပါတယျ
ဒီအကွှစေတှေ့ဟော ရောမအငျပါယာကထုတျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ စပိနျမှာတှရှေိ့ရခွငျးဖွဈပါတယျ
၂ Gold Rush အကွှစေေ့
Gold Rush အကွှစေေ့
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတော့ အရမျးကံကောငျးလှနျးတဲ့စုံတှဲတဈတှဲဟာ လမျးလြောကျထှကျရငျးနဲ့ထီပေါကျသှားခဲ့ပါတယျ
မွောကျကာရိုလိုငျးနားဟာ ရှတေူးသမားတှရေဲ့အိမျဖွဈပွီးတော့ အခုခြိနျထိမဖျောထုတျနိုငျသေးတဲ့ရှတှေငျးတှလေညျးရှိနပေါသေးတယျ
သူတို့ခှေးလေးနဲ့လမျးလြောကျထှကျနစေဉျမှာ ဒျေါလာ ၁၀ သနျးတနျရှားပါးလှနျးတဲ့ ဒင်ျဂါးပွားတှေ သဈပငျအောကျမှာမွှုပျနတောကိုတှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ
အပွားပေါငျး ၁၄၂၇ ခုရှိပွီးတော့ ၁၈၄၇ ကနေ ၁၈၉၄ အတှငျးမှာ San Ana က Professional Coin Grading Service ရဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ David Hall က အတညျပွုထုတျဝလေိုကျတဲ့ရှဒေင်ျဂါးတှပေဲဖွဈပါတယျ
တခြို့ဒင်ျဂါးတှဟောအလှနျရှားပါးတဲ့အတှကျ တဈပွားကို ဒျေါလာ ၁ သနျးအထိရနိုငျခဲ့ပါတယျ
ဒျေါလာ ၂၀ တနျခဲခွဈကံစမျးမဲပေါကျတာကို ကံကောငျးတယျလို့သငျထငျနသေေးလား
၁ Jerey သံခတျေဒင်ျဂါး
၂၀၁၂ ခုနှဈက ဂြာဆီကြှနျးစုပျေါမှာတှခေဲ့ရတဲ့ ဒင်ျဂါးပွားတှကေိုမွငျရငျသငျလနျ့သှားနိုငျပါတယျ
ဒီကြှနျးစုဟာ အင်ျဂလိပျပိုငျဖွဈပွီးတော့ အင်ျဂလိပျနဲ့ပွငျသဈယဉျကြေးမှုတှလှေမျးခွုံထားပါတယျ
နှဈ ၃၀ လောကျဒီရတနာသိုကျကိုရှာဖှပွေီးတဲ့နောကျမှာတော့
ရတနာသိုကျရှာဖှသေူအသဈနှဈဦးဟာ သံခတျေက ဒင်ျဂါပွားတှကေိုတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ
အခုသူ့လကျထဲမှာကိုငျထားတဲ့ဒင်ျဂါးပွားဟာ ပေါငျ ၂၀၀ နီးပါးတနျဖိုးရှိပါတယျ
ဒီတော့ တှရှေိ့သမြှအားလုံးရဲ့တနျဖိုးဆိုရငျ ပေါငျ ၁၀မီလြံ ၁၂ မီလြံလောကျရှိနိုငျပါတယျ
ဒီဒင်ျဂါးတှကေိုတော့လယျသမားတဈယောကျရဲ့ခွံစညျးရိုးအောကျ ၃ ပအေနကျမှာတှရှေိ့ခဲ့တာပါ
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ထူးခြား ဆုံး အကြွေေ စ့ များအကြောင်း
သီပေါမြို့စံလောင်းကျေးရွာ အကျော်နမ္မသစ်တောကြိုးဝိုင်း ပိတောက်စိုက်ကွင်းအတွင်း၌ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် ပုပ် ပွလောက် များတက်ေ သဆုံးေ န သူ အား သွား သယ်
အကျော်နမ္မသစ်တောကြိုးဝိုင်း
Shar Htat Paing
သီပေါမွို့စံလောငျးကြေးရှာ အကြျောနမ်မသဈတောကွိုးဝိုငျး ပိတောကျစိုကျကှငျးအတှငျး၌ သနေတျဒဏျရာဖွငျ့ ပုပျ ပှလောကျ မြားတကျေ သဆုံးေ န သူ အား သှား သယျ
အကြျောနမ်မသဈတောကွိုးဝိုငျး
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on သီပေါမြို့စံလောင်းကျေးရွာ အကျော်နမ္မသစ်တောကြိုးဝိုင်း ပိတောက်စိုက်ကွင်းအတွင်း၌ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် ပုပ် ပွလောက် များတက်ေ သဆုံးေ န သူ အား သွား သယ်
ကင် မ ရာေ ပ်ါနှ င့် တ ကယ့်ေ လာ က မှာ ဂြိုလ် သား များနှင့် ကြုံ ခဲ့ ရေ သာဖြစ် စဉ် ၅ ခု
၁၆၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုလ်သားတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေ UFOတွေတဲ့ကိစ္စတွေအမြောက်အများရှိလာပါတယ်
လူတွေဟာ ဒီအကြောင်းတွေကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြပေမယ့်
သူတို့တွေ နယ်မြေ ၅၁ ကိုရောက်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုရင် ..ဒါမှမဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအပြာရောင်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖူးမယ်ဆိုရင်တော့
တကယ်လို့သင်ဟာ ဂြိုလ်သားရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်
အခုဖော်ပြမှာကတော့ ဂြိုလ်သားတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်း ၅ ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ မှတ်တိုင်တစ်ခုကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေခဲ့တာပါ
သူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ သတိမထားမခဲ့ပေမယ့် အိမ်ရောက်လို့မှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ခုခုထူးခြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
သေးငယ်ပြီးတော့ မှတ်တိုင်နောက်မှာရပ်နေတဲ့အကောင်လေးက ဒီလူ့ကိုကြည့်နေခဲ့တာပါ
မီးခိုးရောင်ဆံပင်ဟာ ချိုင်းကကျောက်တိုင်နဲ့ရောနေတဲ့အတွက် ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုမမြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
၂ ခေါင်မိုးပေါ်က သတ္တဝါ..
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာရိုက်ထားတဲ့ မက္ကဆီကိုမြို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာလူတစ်ယောက်ဟာ ဆူညံသံတွေကြားတဲ့အတွက်အိမ်အပြင်ထွက်လာပါတယ်
သစ်ရွက်လှုပ်သံတွေကြားတဲ့အခါမှာ သူကင်မရာကို မြင်ကွင်းဆွဲကြည့်လိုက်တော့ သူ့နောက်ကနေ စူးရှကျယ်လောင်တဲ့အသံတစ်ခုထွက်လာကိုကြားရပါတယ်
ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ ဂြိုလ်သားလိုသတ္တဝါတစ်ကောင်ဟာ သူ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
အဲ့ဒီသတ္တဝါဟာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်
၃ . နယ်မြေ ၅၁ မှာတွေ့ကြုံရမှု
ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ တိုးရစ်တွေနဲ့ XFile စူစမ်းလေ့လာသူတွေဟာ နယ်မြေ ၅၁ အပြင်ဘက်မှာခြေရှုပ်နေကြရင်း
ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးခဲ့တာကတော့ ကောလိပ်ကျောင်းသား ၃ ယောက်ဟာ လင်ကွန်းမြို့ကို ခရီးထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ဟာ နယ်မြေ ၅၁ နယ်နိမိတ်မှာလမ်းလျောက်နေရင်း ကန့်သတ်အမှတ်အသားတွေကိုဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေခဲ့တာပါ
စကားပြောပြီးနောက်မှာ ကင်မရာကိုင်ထားတဲ့ကောင်လေး အနောက်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတာက
ဒါနဲ့ အဖွဲ့ထဲကတစ်ယောက်က ကင်မရာယူသွားပြီးလမ်းမအတိုင်းလျောက်ကြည့်ခဲကြတယ်
နောက်တော့ ကွန်ကရစ်တိုင်တစ်တောင်နောက်မှာရှိနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ဟာ သူတို့အနားကပ်လာတဲ့အခါမှာ အသံစူးစူးတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်
ဒီသတ္တဝါရဲ့ခေါင်းတိုက်နောက်ကထွက်လာတာမြင်တဲ့အခါမှာတော့ ကောင်လေးတွေဟာ ကြောက်လန့်သွားပြီး အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်
၁ ညဘက်အနားယူနေစဉ် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ်အေပရယ်လမှာ သြစတေးသျလူငယ်တစ်ဦးစာ သူ့ကြောင်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်
ဒါနဲ့ ကြောင်ကို ဗီဒီယိုရိုက်နေတုန်းမှာပဲထူးဆန်းတဲ့ရှည်မျောမျောအရာတစ်ခကို သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်
အနီးကပ်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုက်အနည်းငယ်အဝေးမှာသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်
ကငျ မ ရာေ ပျါနှ ငျ့ တ ကယျ့ေ လာ က မှာ ဂွိုလျ သား မြားနှငျ့ ကွုံ ခဲ့ ရေ သာဖွဈ စဉျ ၅ ခု
၁၆၀၀ ပွညျ့နှဈနောကျပိုငျးကစပွီးတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဂွိုလျသားတှတေဲ့ကိစ်စတှေ UFOတှတေဲ့ကိစ်စတှအေမွောကျအမြားရှိလာပါတယျ
လူတှဟော ဒီအကွောငျးတှကေို ဇဝဇေဝါဖွဈနကွေပမေယျ့
သူတို့တှေ နယျမွေ ၅၁ ကိုရောကျဖူးခဲ့တယျဆိုရငျ ..ဒါမှမဟုတျ အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာအပွာရောငျမှတျတမျးစာအုပျကိုဖတျရှုဖူးမယျဆိုရငျတော့
တကယျလို့သငျဟာ ဂွိုလျသားရှိတယျလို့ယုံကွညျတဲ့ဟုတျဟုတျ မဟုတျဟုတျ
အခုဖျောပွမှာကတော့ ဂွိုလျသားတှကေိုတှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့မှတျတမျး ၅ ခုပဲဖွဈပါတယျ
ဒီဇငျဘာ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ရှေးဟောငျးသခငြ်္ိုငျးတဈခုအတှငျးမှာ လူတဈယောကျဟာ မှတျတိုငျတဈခုကို ဓါတျပုံရိုကျနခေဲ့တာပါ
သူရုပျရှငျရိုကျကူးနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ သတိမထားမခဲ့ပမေယျ့ အိမျရောကျလို့မှတျတမျးကိုပွနျကွညျ့တဲ့အခါ တဈခုခုထူးခွားနတောကိုတှရေ့ပါတယျ
သေးငယျပွီးတော့ မှတျတိုငျနောကျမှာရပျနတေဲ့အကောငျလေးက ဒီလူ့ကိုကွညျ့နခေဲ့တာပါ
မီးခိုးရောငျဆံပငျဟာ ခြိုငျးကကြောကျတိုငျနဲ့ရောနတေဲ့အတှကျ ရိုကျကူးနတေဲ့အခြိနျမှာ သူ့ကိုမမွငျခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ
၂ ခေါငျမိုးပျေါက သတ်တဝါ..
၂၀၁၅ ခုနှဈမှာရိုကျထားတဲ့ မက်ကဆီကိုမွို့ဗီဒီယိုမှတျတမျးပဲဖွဈပါတယျ
၂၀၁၅ ခုနှဈမှာလူတဈယောကျဟာ ဆူညံသံတှကွေားတဲ့အတှကျအိမျအပွငျထှကျလာပါတယျ
သဈရှကျလှုပျသံတှကွေားတဲ့အခါမှာ သူကငျမရာကို မွငျကှငျးဆှဲကွညျ့လိုကျတော့ သူ့နောကျကနေ စူးရှကယျြလောငျတဲ့အသံတဈခုထှကျလာကိုကွားရပါတယျ
ပိနျပိနျရှညျရှညျနဲ့ ဂွိုလျသားလိုသတ်တဝါတဈကောငျဟာ သူ့အိမျခေါငျမိုးပျေါမှာမတျတပျရပျနတောကိုတှရေ့ပါတယျ
အဲ့ဒီသတ်တဝါဟာသူ့ကိုစိုကျကွညျ့နပွေီး ခဏအကွာမှာတော့ ထှကျသှားခဲ့ပါတယျ
၃ . နယျမွေ ၅၁ မှာတှကွေုံ့ရမှု
ဒီနှဈပိုငျးတှမှော တိုးရဈတှနေဲ့ XFile စူစမျးလလေ့ာသူတှဟော နယျမွေ ၅၁ အပွငျဘကျမှာခွရှေုပျနကွေရငျး
ဒီဗီဒီယိုကိုရိုကျကူးခဲ့တာကတော့ ကောလိပျကြောငျးသား ၃ ယောကျဟာ လငျကှနျးမွို့ကို ခရီးထှကျလာခဲ့တဲ့အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ
သူတို့ဟာ နယျမွေ ၅၁ နယျနိမိတျမှာလမျးလြောကျနရေငျး ကနျ့သတျအမှတျအသားတှကေိုဓါတျပုံရိုကျကူးနခေဲ့တာပါ
စကားပွောပွီးနောကျမှာ ကငျမရာကိုငျထားတဲ့ကောငျလေး အနောကျလှညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာမွငျလိုကျရတာက
ဒါနဲ့ အဖှဲ့ထဲကတဈယောကျက ကငျမရာယူသှားပွီးလမျးမအတိုငျးလြောကျကွညျ့ခဲကွတယျ
နောကျတော့ ကှနျကရဈတိုငျတဈတောငျနောကျမှာရှိနတေဲ့ ထူးဆနျးတဲ့သတ်တဝါတဈကောငျဟာ သူတို့အနားကပျလာတဲ့အခါမှာ အသံစူးစူးတဈခုပွုလုပျလိုကျပါတယျ
ဒီသတ်တဝါရဲ့ခေါငျးတိုကျနောကျကထှကျလာတာမွငျတဲ့အခါမှာတော့ ကောငျလေးတှဟော ကွောကျလနျ့သှားပွီး အောငျမွငျစှာဆုတျခှာခဲ့ကွပါတော့တယျ
၁ ညဘကျအနားယူနစေဉျ တှရှေိ့ခဲ့ခွငျး
၂၀၁၁ ခုနှဈအပေရယျလမှာ သွစတေးသလြူငယျတဈဦးစာ သူ့ကွောငျကို ရုပျရှငျရိုကျဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ
ဒါနဲ့ ကွောငျကို ဗီဒီယိုရိုကျနတေုနျးမှာပဲထူးဆနျးတဲ့ရှညျမြောမြောအရာတဈခကို သတိပွုမိခဲ့ပါတယျ
အနီးကပျဆှဲကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကိုကျအနညျးငယျအဝေးမှာသူ့ကိုကွညျ့နတေဲ့ ဂွိုလျသားတဈကောငျကိုတှခေဲ့ရပါတော့တယျ
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ကင် မ ရာေ ပ်ါနှ င့် တ ကယ့်ေ လာ က မှာ ဂြိုလ် သား များနှင့် ကြုံ ခဲ့ ရေ သာဖြစ် စဉ် ၅ ခု
က မ္ဘာေ ပါ် မှာ တ ကယ် ရှိ တဲ့ ထရန် စဖော် မာ စက် ရုပ် ကား ( ၆) စီး
တူရီကီ ကုမ္ပဏ္ဍီတစ်ခုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ထရန်စဖော်မာစက်ရုပ်ကို Letrons လို့နာမည်ပေးထားပါတယ် ။ BMW အနီရောင်ကားမှနေပြီး သင့်မျက်စိရှေ့မှာတင် စက်ရုပ်ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒီထရန်စဖော်မာကို အင်ဂျင်နီယာ ၁၂ ယောက်နှင့် အကူ ၄ ယောက်တို့က အချိန် ၈ လကြာဖန်တီးယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ BMW Coupe3Series ကားတွေနဲ့ဘာမှမကွာပါဘူး ။
Sao Paluo မှာကျင်းပတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲမှာ KIA Motors က စက်ရုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ SUV ကားကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ စက်ရုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာ လက်နက်လိုအရာမျိုးတောင်ပါသေးတယ် ။ ဘယ်ညာတံခါးတွေနဲ့ မှန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါင်မိုးအပြင် ကားအရှေ့ပိုင်းတွေကို ဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ စက်ရုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပါ ။
ဒီကားကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးရှပ်ပြေးကားတစ်စီးဖြစ်ပြီး တီထွင်ချိန် ၆ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ် ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရေပေါ်ရှပ်ပြေးကားအဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီကားဟာ ကုန်းပေါ်မှာ တစ်နာရီ ၁၂၅ မိုင်နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ရေထဲမှာတော့ ၄၅ မိုင်ကနေ ၆၂ မိုင်အထိ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် SEA LION ကို အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရေပေါ်ရှပ်ပြေးကားအဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ကားတွေနဲ့စခန်းချလည်ပတ်ခြင်းဟာ ခေတ်စားလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့မြို့မှနေထွက်ခွာပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ကိုသွားရောက်ခါ ကားထဲမှာနေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ် ။
ပြင်သစ်ကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဂျစ်ကားကတော့ အခုလိုခရီးသွားဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကားတစ်စီးပါပဲ ။ ဒီဂျစ်ကားဟာ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအပြည့်အစုံရှိနေတဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ။
KLassen ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဒီကားကတော့ မိနီဗန်ဇိမ်ခံကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကားကို လက်မ ၂၀ လောက်အထိဆန့်ထုတ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရှည်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကားထဲမှာတော့ လူလေးယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လို့ရနိုင်ပြီး ဘားအသေးစားတစ်ခုနဲ့ ပစ္စည်းထည့်စရာအကန့်လေးတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ် ။
Overland ကုမပ္ပဏ္ဍီကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Volkswagen Wagon ကတော့ နောက်တွဲအကန့်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ယာဉ်တစ်စီးပါ ။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီကားကို ကားအိမ်တစ်လုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတာပါ ။ ဒီကားရဲ့ အပိုပါတဲ့အပိုင်းဟာ ကားနောက်ကနေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရွှေ့လျားမှုကိုတော့ လျပ်စစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် ။
က မ်ဘာေ ပျါ မှာ တ ကယျ ရှိ တဲ့ ထရနျ စဖျော မာ စကျ ရုပျ ကား ( ၆) စီး
တူရီကီ ကုမ်ပဏ်ဍီတဈခုကနထေုတျလုပျလိုကျတဲ့ ထရနျစဖျောမာစကျရုပျကို Letrons လို့နာမညျပေးထားပါတယျ ။ BMW အနီရောငျကားမှနပွေီး သငျ့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ စကျရုပျပုံစံပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ ။ ဒီထရနျစဖျောမာကို အငျဂငျြနီယာ ၁၂ ယောကျနှငျ့ အကူ ၄ ယောကျတို့က အခြိနျ ၈ လကွာဖနျတီးယူခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ ။ ကွညျ့လိုကျရငျတော့ BMW Coupe3Series ကားတှနေဲ့ဘာမှမကှာပါဘူး ။
Sao Paluo မှာကငျြးပတဲ့ မျောတျောယာဉျပွပှဲမှာ KIA Motors က စကျရုပျအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ SUV ကားကိုမိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ။ စကျရုပျရဲ့လကျထဲမှာ လကျနကျလိုအရာမြိုးတောငျပါသေးတယျ ။ ဘယျညာတံခါးတှနေဲ့ မှနျနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ခေါငျမိုးအပွငျ ကားအရှပေို့ငျးတှကေို ဖှငျ့ထုတျပွီးတော့ စကျရုပျအဖွဈပွောငျးလဲသှားတာပါ ။
ဒီကားကတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာအမွနျဆုံးရှပျပွေးကားတဈစီးဖွဈပွီး တီထှငျခြိနျ ၆ နှဈကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ ။ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံးရပေျေါရှပျပွေးကားအဖွဈစံခြိနျတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒီကားဟာ ကုနျးပျေါမှာ တဈနာရီ ၁၂၅ မိုငျနှုနျးနဲ့မောငျးနှငျနိုငျပွီး ရထေဲမှာတော့ ၄၅ မိုငျကနေ ၆၂ မိုငျအထိ မောငျးနှငျနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ SEA LION ကို အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံးရပေျေါရှပျပွေးကားအဖွဈသတျမှတျရမှာပဲဖွဈပါတယျ ။
ယနခေ့တျေမှာတော့ ကားတှနေဲ့စခနျးခလြညျပတျခွငျးဟာ ခတျေစားလာတဲ့အရာတဈခုဖွဈလာပါတယျ ။ လူတှဟော သူတို့ရဲ့မွို့မှနထှေကျခှာပွီးတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့နရောတဈကိုသှားရောကျခါ ကားထဲမှာနထေိုငျကွလရှေိ့ပါတယျ ။
ပွငျသဈကထုတျလိုကျတဲ့ဒီဂဈြကားကတော့ အခုလိုခရီးသှားဖို့အတှကျအသငျ့တျောဆုံးကားတဈစီးပါပဲ ။ ဒီဂဈြကားဟာ ပရိဘောဂပစ်စညျးတှအေပွညျ့အစုံရှိနတေဲ့ သကျတောငျ့သကျသာရှိတဲ့အခနျးတဈခနျးအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ ။
KLassen ကထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ဒီကားကတော့ မိနီဗနျဇိမျခံကားတဈစီးပဲဖွဈပါတယျ ။ လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာကားကို လကျမ ၂၀ လောကျအထိဆနျ့ထုတျနိုငျပါသေးတယျ ။ ခလုတျတဈခကျြနှိပျလိုကျရုံနဲ့စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးရှညျထှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ ။ ကားထဲမှာတော့ လူလေးယောကျမကျြနှာခငျြးဆိုငျထိုငျလို့ရနိုငျပွီး ဘားအသေးစားတဈခုနဲ့ ပစ်စညျးထညျ့စရာအကနျ့လေးတှအေမြားကွီးပါဝငျပါတယျ ။
Overland ကုမပ်ပဏ်ဍီကထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Volkswagen Wagon ကတော့ နောကျတှဲအကနျ့တဈခုနဲ့ပေါငျးစပျထားတဲ့ယာဉျတဈစီးပါ ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ဒီကားကို ကားအိမျတဈလုံးအဖွဈသတျမှတျလို့ရတာပါ ။ ဒီကားရဲ့ အပိုပါတဲ့အပိုငျးဟာ ကားနောကျကနထှေကျလာမှာဖွဈပွီးတော့ ရှလြေ့ားမှုကိုတော့ လပျြစဈနဲ့ထိနျးခြုပျထားပါတယျ ။
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on က မ္ဘာေ ပါ် မှာ တ ကယ် ရှိ တဲ့ ထရန် စဖော် မာ စက် ရုပ် ကား ( ၆) စီး
” ဆရာကြီး… ဆီ… မရှိေ တာ့ ဘူး…” ” ရေလုံပြု တ် ကွာ….”
” ဆရာကြီး…ဆီ… မရှိတော့ဘူး…”
” အချိုမှုန့်….မရှိတော့ဘူး …”
” ဆားကုန်ပြီ …”
” ငပိရေဖျော် ထည့်မွှေလိုက်ကွာ…ငါလခွီး
ထပ်မေးမနေနဲ့ ရှိသမျှ ဟင်းချက်ပစ္စည်း အကုန်ထည့်ပြီး
မင်းပါပါတွေအကုန်လုံးက ဟင်းမရှိလည်း ရေဆန်းပြီး
စားတတ်တဲ့ကောင်တွေ ချည်းပဲကွ ….”
crd ငါပဲ င စစ် (or) စစ်မြတ် သွေး
” ဆရာကွီး… ဆီ… မရှိေ တာ့ ဘူး…” ” ရလေုံပွု တျ ကှာ….”
” ဆရာကွီး…ဆီ… မရှိတော့ဘူး…”
” အခြိုမှုနျ့….မရှိတော့ဘူး …”
” ဆားကုနျပွီ …”
” ငပိရဖြေျော ထညျ့မှလေိုကျကှာ…ငါလခှီး
ထပျမေးမနနေဲ့ ရှိသမြှ ဟငျးခကျြပစ်စညျး အကုနျထညျ့ပွီး
မငျးပါပါတှအေကုနျလုံးက ဟငျးမရှိလညျး ရဆေနျးပွီး
စားတတျတဲ့ကောငျတှေ ခညျြးပဲကှ ….”
crd ငါပဲ င စဈ (or) စဈမွတျ သှေး
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ” ဆရာကြီး… ဆီ… မရှိေ တာ့ ဘူး…” ” ရေလုံပြု တ် ကွာ….”
ကမ္ဘာ့ အန္တ ရာယ် အများ ဆုံး က မ္ဘာ လှည့် ခ ရီး သွားေ တွ လည် ပတ် ရာေ န ရာ (၅)ခု
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဟာ စိတ်အပန်းပြေစေပြီးတော့ အေးချမ်းတဲ့ရှုခင်းလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပဲသွားလေ့ရှိကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေကတော့ တကယ့်ကိုအန္တရာယ်များလွန်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဖော်ပြမယ့်နေရာ ၅ ခုကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာ ၅ နေရာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Death Road လမ်းမဟာ ၆၉ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးတော ဘိုလီးဗီးယား နိုင်ငံ ရန်ဂတ်မှာတည်ရှိပါတယ် ။ လေ့လာသူတွေကတော့ ဒီလမ်းဟာ ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံးလမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ် ။ ဒီလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ။ အဓိက ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ လမ်းခင်းထားတဲ့မြေဟာ တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပါပဲ ။ ဒီအတွက်ကြောင့်ဘီးချော်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ ယာဉ်မောင်းတွေအတွက်တော တကယ်ကိုအန္တရာယ်များလွန်းပါတယ် ။
နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုကတော့ လိ့မ်ထွက်သွားတဲ့ယာဉ်တွေကိုတားထားပေးမယ့် လမ်းဘေးက တိုင်တွေမရှိတာပါပဲ
ဒီတော့ ကားဟာ မီတာ ၆၀၀ ထက်မနဲလွင့်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ် ။ လမ်းမရဲ့ဆိုးရွားမှုဟာ လူပေါင်း ၂၀၀ လောက်ကိုဝါးမြိုခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတိုးရစ်တွေကိုတော့ ဒီလမ်းကိုရှောင်ရှားဖို့သတိပေးထားပါတယ် ။
ဒီလမ်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ အန္တရာယ်အများဆုံးလူသွားလမ်းတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီနာမည်ပေးထားတာကတော့ စပိန်ဘုရင် Alfonso ဒီလမ်းပေါ်ကနေ တစ်ကြိမ်ဖြတ်လျောက်သွားခဲ့ဖူးတာကြောင့်ပါ ။ တောင်ထပ်နှစ်ခုကို ဆက်ထားတဲ့ဒီလမ်းဟာ ၁ မီတာနီးပါးသာအကျယ်ရှိပေမယ့် အရှည် မီတာ ၂၀၀ နဲ့ အနက် မီတာ ၁၀၀ ရှိပါတယ် ။ ဒီလျောက်လမ်းဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာတော့ စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါပြီ ။
လူထုကိုတော့ ဒီလမ်းမကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပေမယ့် ခိုးဝင်တာတွေ ..တောင်ပေါ်ကို ကုတ်ကပ်တက်လာတွေရှိနေပါသေးတယ် ။ လမ်းကိုလျစ်လျူရှုထားမိခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူသေမှု ၄ ခုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီလမ်းကိုပိတ်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူထုကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေကောက်ခံပြီး ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။
3. Hua Shan တောင်
ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာမှာတောင်တက်ချင်သလား ။ ဒါဆိုရင်တော့ Hua Shan တောင်တန်းကဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာကိုသင်ရောက်ရင်တော့ ဘာကြောင့်အန္တရာယ်များရလဲဆိုတာကို တစ်မိနစ်အတွင်းနားလည်သွားမှာပါ ။ တောင်နံဘေးမှာရိုက်ထားတဲ့သစ်သားပြားတွေဟာအချိန်မရေးပြုတ်ကျသွားနိုင်ချေရှိတဲ့အတွက် သင့်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ သစ်သားပြားပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါသင်အားကိုးရမှာကတော့ သင့်ခြေထောက်အောက်ကကျောက်တုံးလေးပဲဖြစ်တယ် ။ မဟုတ်ရင်တော့သင်ပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။ နှစ်စဉ်လူ ၁၀၀ လောက်ဒီတောင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနေကြပါတယ် ။ ဒီတော့ သင်ဒီတောင်တက်ဖို့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုကြိုတွက်ထားရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ် ။
ဒါကတော့ စပိန်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုပါ ။ နွားခြောက်ကောင်ကို ၈၂၅ မီတာ ရှည်လျားတဲ့လမ်းပေါ်မှာလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲဟာနှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၂ သောင်းလောက်ကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် ။ နှစ်စဉ်တိုင်းလဲလူ ၁၀၀ လောက်ဒဏ်ရာရပြီး ၁၅ ယောက်လောက်သေဆုံးဖူးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိခဲ့တယ် ။ ဒီလူတွေဟာရဲရင့်လွန်းလို့ နွားရိုင်းတွေပြေးလမ်းထဲဝင်လာတာလားဒါမှမဟုတ် တမင်သက်သက် အရူးထတာလား ။ သင်ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ … ?
ဒီတောင်စွန်းကတော့ နော်ဝေးမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာကြောင့်အန္တရာယ်များရသလဲဆိုတာသင်နားလည်မှာပါ ။ ဒီကျောက်တုံးကြီးဟာ မီတာ ၈၀၀ အမြင့်မှာရှိပြီးတော့ တောင်ထပ်ရောက်ဖို့ကို ၁၀ နာရီလောက်သွားရပါတယ် ။ တောင်ထိပ်မှာလူတွေအများကြီးရှိမစေဖို့အတွက် ဓါတ်ရထားလည်းတည်ဆောက်မထားတဲ့အတွက် အခြေအနေက အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားပါတယ် ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဒီတောင်ထိပ်ကခုန်ချပြီးသတ်သေသွားကြောင်းသိရပါတယ် ။ ဒါဟာ Trolltunga တောင်ထွတ်ပေါ်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူသေမှုပါပဲ ။
ကမ်ဘာ့ အန်တ ရာယျ အမြား ဆုံး က မ်ဘာ လှညျ့ ခ ရီး သှားေ တှ လညျ ပတျ ရာေ န ရာ (၅)ခု
ပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျတော့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှဟော စိတျအပနျးပွစေပွေီးတော့ အေးခမျြးတဲ့ရှုခငျးလေးတှရှေိတဲ့နရောကိုပဲသှားလရှေိ့ကွပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျတှလောရောကျကွတာဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့နရောတှကေတော့ တကယျ့ကိုအန်တရာယျမြားလှနျးတဲ့နရောတှဖွေဈပါတယျ ။ အခုဖျောပွမယျ့နရော ၅ ခုကတော့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျတှလောရောကျလညျပတျကွတဲ့ ကမ်ဘာပျေါက အန်တရာယျအမြားဆုံးနရော ၅ နရောပဲဖွဈပါတယျ ။
Death Road လမျးမဟာ ၆၉ ကီလိုမီတာရှညျလြားပွီးတော ဘိုလီးဗီးယား နိုငျငံ ရနျဂတျမှာတညျရှိပါတယျ ။ လလေ့ာသူတှကေတော့ ဒီလမျးဟာ ကမ်ဘာ့အန်တရာယျအမြားဆုံးလမျးတဈခုအဖွဈ သတျမှတျထားကွပါတယျ ။ ဒီလမျးပျေါမှာဖွဈခဲ့တဲ့မတျောတဆမှုပေါငျးမြားစှာရှိပါတယျ ။ အဓိက ဖွဈရတဲ့အကွောငျးရငျးကတော့ လမျးခငျးထားတဲ့မွဟော တညျငွိမျမှုမရှိတဲ့အတှကျပါပဲ ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ဘီးခြျောမှုတှဖွေဈပွီးတော့ ယာဉျမောငျးတှအေတှကျတော တကယျကိုအန်တရာယျမြားလှနျးပါတယျ ။
နောကျထပျ ပွဿနာတဈခုကတော့ လိ့မျထှကျသှားတဲ့ယာဉျတှကေိုတားထားပေးမယျ့ လမျးဘေးက တိုငျတှမေရှိတာပါပဲ
ဒီတော့ ကားဟာ မီတာ ၆၀၀ ထကျမနဲလှငျ့ထှကျသှားနိုငျပါတယျ ။ လမျးမရဲ့ဆိုးရှားမှုဟာ လူပေါငျး ၂၀၀ လောကျကိုဝါးမွိုခဲ့ပွီဖွဈပွီးတိုးရဈတှကေိုတော့ ဒီလမျးကိုရှောငျရှားဖို့သတိပေးထားပါတယျ ။
ဒီလမျးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာတော့ အန်တရာယျအမြားဆုံးလူသှားလမျးတဈခုပါပဲ ။ ဒီနာမညျပေးထားတာကတော့ စပိနျဘုရငျ Alfonso ဒီလမျးပျေါကနေ တဈကွိမျဖွတျလြောကျသှားခဲ့ဖူးတာကွောငျ့ပါ ။ တောငျထပျနှဈခုကို ဆကျထားတဲ့ဒီလမျးဟာ ၁ မီတာနီးပါးသာအကယျြရှိပမေယျ့ အရှညျ မီတာ ၂၀၀ နဲ့ အနကျ မီတာ ၁၀၀ ရှိပါတယျ ။ ဒီလြောကျလမျးဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ပဈထားခဲ့တဲ့အတှကျ အခုအခြိနျမှာတော့ စိတျမကောငျးစရာအခွအေနမြေိုးဖွဈနပေါပွီ ။
လူထုကိုတော့ ဒီလမျးမကိုလာရောကျခှငျ့ပိတျပငျထားပမေယျ့ ခိုးဝငျတာတှေ ..တောငျပျေါကို ကုတျကပျတကျလာတှရှေိနပေါသေးတယျ ။ လမျးကိုလဈြလြူရှုထားမိခဲ့တဲ့အခြိနျမှာလူသမှေု ၄ ခုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ဒီလမျးကိုပိတျထားရခွငျးဖွဈကွောငျး လူထုကိုရှငျးပွခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့လညျး အခုခြိနျထိ ပျေါပွူလာဖွဈနသေေးတဲ့အတှကျ ရနျပုံငှကေောကျခံပွီး ပွနျလညျဖှငျ့နိုငျဖို့ပွငျဆငျနပေါတယျ ။
3. Hua Shan တောငျ
ကမ်ဘာ့အန်တရာယျအမြားဆုံးနရောမှာတောငျတကျခငျြသလား ။ ဒါဆိုရငျတော့ Hua Shan တောငျတနျးကဖိတျချေါပါတယျ ။ ဒီနရောကိုသငျရောကျရငျတော့ ဘာကွောငျ့အန်တရာယျမြားရလဲဆိုတာကို တဈမိနဈအတှငျးနားလညျသှားမှာပါ ။ တောငျနံဘေးမှာရိုကျထားတဲ့သဈသားပွားတှဟောအခြိနျမရေးပွုတျကသြှားနိုငျခရြှေိတဲ့အတှကျ သငျ့ခွလှေမျးတိုငျးကိုဂရုစိုကျရမှာဖွဈပါတယျ ။ သဈသားပွားပွုတျကသြှားတဲ့အခါသငျအားကိုးရမှာကတော့ သငျ့ခွထေောကျအောကျကကြောကျတုံးလေးပဲဖွဈတယျ ။ မဟုတျရငျတော့သငျပွုတျကသြှားပါလိမျ့မယျ ။ နှဈစဉျလူ ၁၀၀ လောကျဒီတောငျပျေါကပွုတျကပြွီးအသကျဆုံးရှုံးနကွေပါတယျ ။ ဒီတော့ သငျဒီတောငျတကျဖို့စဉျးစားထားမယျဆိုရငျတော့ ဖွဈလာနိုငျတာတှကေိုကွိုတှကျထားရငျပိုကောငျးလိမျ့မယျ ။
ဒါကတော့ စပိနျမှာနှဈစဉျနှဈတိုငျးကငျြးပလရှေိ့တဲ့ပှဲစဉျတဈခုပါ ။ နှားခွောကျကောငျကို ၈၂၅ မီတာ ရှညျလြားတဲ့လမျးပျေါမှာလှတျပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ ။ ဒီပှဲဟာနှဈစဉျ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျ ၂ သောငျးလောကျကို ဆှဲဆောငျထားတဲ့ပှဲတဈခုလညျးဖွဈတယျ ။ နှဈစဉျတိုငျးလဲလူ ၁၀၀ လောကျဒဏျရာရပွီး ၁၅ ယောကျလောကျသဆေုံးဖူးတဲ့အခွအေနတှေလေညျးရှိခဲ့တယျ ။ ဒီလူတှဟောရဲရငျ့လှနျးလို့ နှားရိုငျးတှပွေေးလမျးထဲဝငျလာတာလားဒါမှမဟုတျ တမငျသကျသကျ အရူးထတာလား ။ သငျရောဘယျလိုထငျပါသလဲ … ?
ဒီတောငျစှနျးကတော့ နျောဝေးမှာရှိတဲ့နရောတဈခုဖွဈပါတယျ ။ တဈခကျြလောကျကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ဘာကွောငျ့အန်တရာယျမြားရသလဲဆိုတာသငျနားလညျမှာပါ ။ ဒီကြောကျတုံးကွီးဟာ မီတာ ၈၀၀ အမွငျ့မှာရှိပွီးတော့ တောငျထပျရောကျဖို့ကို ၁၀ နာရီလောကျသှားရပါတယျ ။ တောငျထိပျမှာလူတှအေမြားကွီးရှိမစဖေို့အတှကျ ဓါတျရထားလညျးတညျဆောကျမထားတဲ့အတှကျ အခွအေနကေ အဆိုးဆုံးဖွဈသှားပါတယျ ။
၂၀၁၆ ခုနှဈမှာတော့ အမြိုးသမီးတဈဦးဒီတောငျထိပျကခုနျခပြွီးသတျသသှေားကွောငျးသိရပါတယျ ။ ဒါဟာ Trolltunga တောငျထှတျပျေါမှာ ပထမဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ လူသမှေုပါပဲ ။
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ကမ္ဘာ့ အန္တ ရာယ် အများ ဆုံး က မ္ဘာ လှည့် ခ ရီး သွားေ တွ လည် ပတ် ရာေ န ရာ (၅)ခု
ရန်ကုန် ပုသိမ် လမ်းေ ဘး မှာ ရက်ရက် စက် စက် သ တ် သွား တဲ့ လူသတ် မှုဖြစ်စ ဉ် က ဒီ လိုတဲ့
လွိုင်ကော် မတ် ၂၀
အငှားယာဉ်မောင်းကိုသတ်ပြီး ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်းမကြီးဘေး ပစ်ချခဲ့တဲ့အမှုမှာ ကားငှားတဲ့သူတွေဟာ အသတ်ခံရသူယာဉ်မောင်း ဂိတ်ထိုးတဲ့နေရာကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားဂိတ်ထိုးခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်သာဂိတ်မှာ ဘယ်သူတွေက ငှားသွားလဲဆိုတာ သဲလွန်စရဖို့ စုံစမ်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသတ်ခံရသူ ယာဉ်မောင်း ကလည်း ချောင်းသာကို လေးရက်အိပ်ခရီးအော်ဒါလိုက်သွားတယ်ဆိုတာ အမေဖြစ်သူကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ သူဟာ ချောင်းသာကို အလာခရီးမှာပဲ လည်ပင်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ (၃)ချက်နဲ့ အသတ်ခံရပြီး လမ်းဘေးမှာ အခုလ (၁၈)ရက် မနက်အစောပိုင်းက အပစ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ငှားသွားတဲ့သူတွေကလည်း ခရီးကို ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ ကားကို နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားက CCTV မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ အလောင်းကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ မှာလည်း အုပ်ထားတဲ့ပုဆိုးတစ်ထည်နဲ့ အမည်းရောင်ကားနောက်ကူရှင် အစွပ်တစ်ခုသာ သဲလွန်စတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ ဦးအေးမင်းဦး(ခ) ဦးဝတုတ်ဆိုသူ ဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အတည်ပြုချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူသွားတဲ့ DD 9313 နံပါတ်နဲ့ Probox ကား အဖြူရောင်ကို တွေ့ရှိသူတွေအနေနဲ့ ကျောင်းကုန်းရဲစခန်းနယ်ထိန်းဖုန်းနံပါတ် 095413967 ကို ဆက်သွယ်သတင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ကြေညာထား ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းက(ပ) ၆၈/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပြီး လူသတ်တရားခံကို အမြန်ဆုံးဖမ်းမိအောင် စုံစမ်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်း – ကိုလတ်(ပုသိမ်)(5 Plus News)
ရနျကုနျ ပုသိမျ လမျးေ ဘး မှာ ရကျရကျ စကျ စကျ သ တျ သှား တဲ့ လူသတျ မှုဖွဈစ ဉျ က ဒီ လိုတဲ့
လှိုငျကျော မတျ ၂၀
အငှားယာဉျမောငျးကိုသတျပွီး ရနျကုနျ-ပုသိမျကားလမျးမကွီးဘေး ပဈခခြဲ့တဲ့အမှုမှာ ကားငှားတဲ့သူတှဟော အသတျခံရသူယာဉျမောငျး ဂိတျထိုးတဲ့နရောကနေ ဖုနျးဆကျပွီး ချေါသှားတာဖွဈတယျလို့ ကြောငျးကုနျးမွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးမွငျ့အောငျက ပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကားဂိတျထိုးခဲ့တဲ့ ရှပွေညျသာဂိတျမှာ ဘယျသူတှကေ ငှားသှားလဲဆိုတာ သဲလှနျစရဖို့ စုံစမျးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အသတျခံရသူ ယာဉျမောငျး ကလညျး ခြောငျးသာကို လေးရကျအိပျခရီးအျောဒါလိုကျသှားတယျဆိုတာ အမဖွေဈသူကို ဖုနျးလှမျးဆကျပွီး အကွောငျးကွားခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ သူဟာ ခြောငျးသာကို အလာခရီးမှာပဲ လညျပငျထိုးသှငျး ဒဏျရာ (၃)ခကျြနဲ့ အသတျခံရပွီး လမျးဘေးမှာ အခုလ (၁၈)ရကျ မနကျအစောပိုငျးက အပဈခခြံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
သူ့ကို ငှားသှားတဲ့သူတှကေလညျး ခရီးကို ရှဆေ့ကျမသှားဘဲ ကားကို နောကျပွနျလှညျ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ဗိုလျမွတျထှနျးတံတားက CCTV မှတျတမျးအရသိရပါတယျ။ အလောငျးကို စဈဆေးတဲ့အခါ မှာလညျး အုပျထားတဲ့ပုဆိုးတဈထညျနဲ့ အမညျးရောငျကားနောကျကူရှငျ အစှပျတဈခုသာ သဲလှနျစတှခေဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သဆေုံးသူဟာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ရှပွေညျသာမွို့နယျနေ ဦးအေးမငျးဦး(ခ) ဦးဝတုတျဆိုသူ ဖွဈတယျလို့ မိသားစုဝငျတှရေဲ့ အတညျပွုခကျြအရ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယူသှားတဲ့ DD 9313 နံပါတျနဲ့ Probox ကား အဖွူရောငျကို တှရှေိ့သူတှအေနနေဲ့ ကြောငျးကုနျးရဲစခနျးနယျထိနျးဖုနျးနံပါတျ 095413967 ကို ဆကျသှယျသတငျးပေးနိုငျတယျလို့ ကွညောထား ပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး ကြောငျးကုနျးမွို့မရဲစခနျးက(ပ) ၆၈/၂၀၁၈ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ ၃၀၂ နဲ့ အမှုဖှငျ့ထားပွီး လူသတျတရားခံကို အမွနျဆုံးဖမျးမိအောငျ စုံစမျးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
သတငျး – ကိုလတျ(ပုသိမျ)(5 Plus News)
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ရန်ကုန် ပုသိမ် လမ်းေ ဘး မှာ ရက်ရက် စက် စက် သ တ် သွား တဲ့ လူသတ် မှုဖြစ်စ ဉ် က ဒီ လိုတဲ့
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့် ဖြစ်လာရင်..
(၁) ၀န်ကြီးတွေ ၀န်ကြီးချူပ်တွေထဲက ညံ့ဖျင်း အသုံးမကျ တဲ့ ၀န်ကြီးတွေကို လဲပါလိမ့်မယ်။
(၂) အဂတိ လိုက်စားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရှင်းပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဥပဒေနဲ့အညီ မလုပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ထိန်းပါလိမ့်မယ်။
credit Zay Lwin
ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံ သမ်မတသဈ ဦးဝငျးမွငျ့ ဖွဈလာရငျ..
(၁) ဝနျကွီးတှေ ဝနျကွီးခြူပျတှထေဲက ညံ့ဖငျြး အသုံးမကြ တဲ့ ဝနျကွီးတှကေို လဲပါလိမျ့မယျ။
(၂) အဂတိ လိုကျစားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ရှငျးပါလိမျ့မယျ။
(၃) ဥပဒနေဲ့အညီ မလုပျတဲ့ တရားစီရငျရေး မဏ်ဍိုငျကို ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ထိနျးပါလိမျ့မယျ။
Author adminPosted on March 22, 2018 Categories NewsLeaveacomment on ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့် ဖြစ်လာရင်..